Tahirin-tsary Gasypatriote Mahajanga
Nanamafy ny polisy avy eto Mahajanga fa tena nandray anjara tamin'ny fanafihana volana vitsy lasa izay i Randria sy ny namany izao votsotra izao sahady. Mahalasa saina ihany ary mampiraviravy tanana azy ireo satria na miasa mafy aza ny mpitandro ny filaminana. Very maina izany raha izao no zava-mitranga.
Sarona niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika sy ny ambim-bola nangalariny moa ireto jiolahy raindahiny ireto kanefa izao votsotra izao, lavon'ny balan'ny polisim-pirenena ihany koa ny naman'izy ireo roalahy izay nanohitra nandritra ny fisamborana.
Efa mpamerin-keloka avokoa ireto jiolahy ireto saingy toy izao hatrany ny zava-mitranga aorian'ny fahasamborana azy ireo.
Hatramin'ny nahasaronana azy ireo, nangingina ny tanànan'i Mahajanga tamin'ny fanafihana goavana sy ny asan-jiolahy. Mitaintaina sahady ny mponina ary efa manahy zavatra ny mpitandro ny filaminana aty an-toerana.